China Open Type Fiber Laser Cutting Machine ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ Guo Hong
ပြားနှင့် Tube လေဆာဖြတ်တောက်စက်
လေဆာရောင်ခြည် Casting အိပ်ရာ
လေဆာရောင်ခြည်ဖြူ Aluminum Beam ကို
ပွင့်လင်းသောဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်စက်ကိုစက်တစ်ခုလုံးသည်အထူးသဖြင့်သတ္တုပြားအမျိုးမျိုးအတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောထိန်သိမ်းခြင်းနှင့်ပင်စင်တပ်ဆင်ခြင်းစနစ်ကိုအသုံးပြုသည်။ အသုံးပြုသူများသည်လည်ပတ်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်တင်းကြပ်သောတပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်စက်၏မြင့်မားသောဖြတ်တောက်မှုတိကျမှုနှင့်အတူစက်၏တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုကိုသေချာစေသည်။ Optical fiber laser ဖြတ်စက်သည်အသုံးပြုသူများအားစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်းနှင့်တင်သွင်းထားသောထိပ်တန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြင့်အသုံးပြုမှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
Aerospace လူမီနီယံ gantry
အဆိုပါအာကာသလူမီနီယံ aerospace စံချိန်စံညွှန်းများအောက်တွင်ထုတ်လုပ်သည်။ အတုအိုမင်းခြင်းနှင့်ဖြေရှင်းချက်ကုသမှုပြီးနောက်, ပြီးဆုံးသည်။ မာကျောမှုသည် T6 သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောခိုင်မာခြင်းနှင့်ပျော့ပြောင်းခြင်း၏လက္ခဏာများရှိသည်။
အလေးချိန်ပေါ့ပါးခြင်း၊ မြန်နှုန်းမြင့်လှုပ်ရှားမှုအတွက်အဆင်ပြေစွာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။ တိကျမှန်ကန်မှုကိုတွေ့သောအခါ၎င်းသည်အပြောင်းအလဲမြန်နှုန်းကိုများစွာတိုးမြှင့်နိုင်သည်။
လေဆာခေါင်းကိုအဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်အညီအရည်အသွေးမြင့်သောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ခိုင်ခံ့ပြီးတာရှည်ခံသည်။ ၎င်းသည်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း "အွန်လိုင်း" တိုင်းတာခြင်းကိုရရှိနိုင်သည်၊ တိုင်းတာမှုသည်တိကျပြီးလျင်မြန်သည်။
control cabinet တွင်အလိုအလျောက်စဉ်ဆက်မပြတ်အပူချိန်အတွက်လေအေးပေးစက်တပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းသည်နွေရာသီတွင်အစိတ်အပိုင်းများအားအပူချိန်အလွန်အမင်းပျက်စီးခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။
CAE ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှအတည်ပြုပြီးအတည်ပြုပြီးသောအိပ်ရာမှာ open-web ၏ပရိုဖိုင်းကိုဂဟေဆော်သည့်ဖွဲ့စည်းပုံအားအသုံးပြုသည်။ အပူချိန်မြင့်သောအပူ ပေး၍ ဆေးကြောခြင်းနှင့်သဘာဝအိုမင်းခြင်းကိုဂဟေဆော်သောစိတ်ဖိစီးမှုကိုဖယ်ရှားရန်၊
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျော်ကြားဆုံးလေဆာအရင်းအမြစ်ထုတ်လုပ်သူ။ စွမ်းအင်ဖြတ်တောက်နိုင်သောစွမ်းရည်၊ သတ္တုပြား၏ဖြတ်တောက်နိုင်မှုအထူသည် ၈၀ မီလီမီတာအထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ မြင့်မားသောပါဝါမှာ Excellent ကရောင်ခြည်အရည်အသွေး။ မြင့်မားသောလျှပ်ကူးပစ္စည်းပြောင်းလဲခြင်းထိရောက်မှု၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်နိမ့်ခြင်း
စက်ပုံစံ GHJG-3015 ◆ GHJG4015 ◆ GHJG4020 ◆ GHJG-4025
အလုပ်လုပ်areaရိယာ 1500x3000mm ◆ 1500x4000mm ◆ 2000x4000mm ◆ 2500x4000mm
မက်စ် လှုပ်ရှားမှုမြန်နှုန်း 120m / min
အရှိန်မြန်နှုန်း ၁.၂ ဂ
တည်နေရာတိကျမှန်ကန်မှု ± 0.03mm
ပြန်လုပ်နိုင်စွမ်း ± 0.02mm
2. အမြန်နှုန်းနှင့်ထိရောက်မှု * ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနိမ့်ကျခြင်း
3. Brand အစိတ်အပိုင်းများ
ရှေ့သို့ အပြည့်အဝပူးတွဲဖိုင်ဘာ Laser ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
နောက်တစ်ခု: Exchange Table Fiber လေဆာဖြတ်စက်
ဖိုင်ဘာ cnc လေဆာ
အပြည့်ပုံစံအပြည့်အစုံပါသော Exchange Table Lase ...
Exchange Table Fiber လေဆာဖြတ်စက်
Optical Fiber Laser ဖြတ်စက်
အပြည့်အဝပူးတွဲဖိုင်ဘာ Laser ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
ဇုန်အေ၊ အသိဉာဏ်ရှိသောထုတ်လုပ်မှုစက်မှုဥယျာဉ်၊ Binhu ရိပ်သာ၊ အဆင့်မြင့်နည်းပညာဇုန်၊